Posted by peter kyaw | at 4:36 AM |
မိခင်ဧရာဝတီရဲ့ အသက်သွေးကို အတူလက်တွဲ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ရပ်တည်ကာကွယ်ကြပါစို့ ကိုပီတာရေ
............ ဟူသည့် အချက်အလက်များနှင့် ဖြောင့် ဖြောင့် ကြီးဆန့် ကျင်နေပါသဖြင် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ အတွက် ........
မြေသဘာဝလက္ခဏာများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးများမည့်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအ၀င်မည်သည့် စီမံကိန်းကိုမဆို ကန့် ကွက်ပါသည်....
ကိုပီတာ နှင့် အတူတူ တည့်တည့်ကြီး ဆန့်ကျင် ပါသည်
Absolutely right. This dam construction is completely opposite with what they are always saying. What they are saying and what they are doing are totally opposite. Shame on you, stupid government. LONG LAST IRRAWADDY!!!
Thanks Uncle Peter,
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို လုံးဝလုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်...
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို လုံးဝလုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်...
ကျမတို့ ဒီလိုပဲ ကန့်ကွက်တယ်လို့ ပြောနေရုံနဲ့တော့ သူတို့က မှုမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာထပ်လုပ်သင့်သလဲ။ တခုခုလုပ်သင့်ပြီ။ နီးစပ်ရာ နည်းများရှိရင်ဖြင့် လမ်းညွှန်ကြပါဦးလား။ ရေတစက်လေးသော် ဖြစ်ရရင်လည်း ဖြစ်ပါရစေ။ ကျမဖြင့် ကန့်ကွက်တယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့သူတွေများလာတာကိုသာ တွေ့ရပြီး သူတို့ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သိနေရတော့ သိပ်ပြီး ခံစားရသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းများရှိနိုင်မလဲရှင်။ ဆန္ဒပြ၊ စကားပြော ဆွေးနွေး အဲလိုတွေရောလုပ်ဖို့လိုမလား....
ဂျစ်တူးလည်းအပြည့်အဝ ကန့် ကွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ-